February 5, 2020 Spnews Comments Off on हलेसी महादेवको दर्शन गरी हेर्नुहोस् माघ २३ गते बिहिबारको राशी अनुसार तपाइको भाग्य !
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) बिहानको समय पढाई लेखाईमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ । ईच्चा आकांक्षा तथा मनोकामना पुरा हुने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरु बन्ने तथा नयाँ काम गर्ने अवसर आउँनेछ । […]
अब धुलो र हिलो लागेका सवारी साधन काठमाडौं भित्रिन नपाउने
February 5, 2020 Spnews Comments Off on अब धुलो र हिलो लागेका सवारी साधन काठमाडौं भित्रिन नपाउने
सरकारले काठमाडौँ भित्रने सवारी साधनले धुलो र हिलो भित्र्याएको भन्दै सरकारले धोई पखाली गरेपछि मात्रै उपत्यका प्रवेश गराउने भएको छ। सवारी साधन धुने ठाउँ (वासिङ सेन्टर) को निर्माण भएपछि उपत्यकामा सवारी साधनले भित्र्याउने फोहर कम […]
झापाको विर्तामोडमा का’टेको लि’ङ्गसहित भेटियो पुरुषको श’व
February 5, 2020 Spnews Comments Off on झापाको विर्तामोडमा का’टेको लि’ङ्गसहित भेटियो पुरुषको श’व
झापाको विर्तामोडमा का’टेको लि’ङ्ग सहित करिब ४० वर्षिय एक पुरुषको श’व ज’लेको अवस्था फेला परेको छ । ज’लेको अवस्थामा फेला परेको श’ब कसको हो भन्ने बारेमा थप जानकारी भने औना बाँकी छ । घ’टनाको बारेमा अनुसन्धान […]
गरिब मान्छे एकाएक करोडपति हुँदा खुशीले झन्डै सासै रोकिएन !
February 5, 2020 Spnews Comments Off on गरिब मान्छे एकाएक करोडपति हुँदा खुशीले झन्डै सासै रोकिएन !
एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो बैंक खातामा कति पैसा होला भनेर चेक गर्नुभयो। कहिल्यै १०–१५ हजारभन्दा बढी ब्यालेन्स नहुने तपाईंको खातामा तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भएको थाहा पाउनुभयो भने के हुन्छ ? निःसन्देह यो चमत्कारले […]
पापी बाबुले गरे ८ वर्षे छोरीको ब*ला*त्का*र ! हरेक रात अ*श्लिल फिल्म देखाउदै लु*ट्यो छोरीको अस्मिता (हेर्नुस् भिडियो)
February 5, 2020 Spnews Comments Off on पापी बाबुले गरे ८ वर्षे छोरीको ब*ला*त्का*र ! हरेक रात अ*श्लिल फिल्म देखाउदै लु*ट्यो छोरीको अस्मिता (हेर्नुस् भिडियो)
आफ्नै छोरीलाई ब’ला’त्का’र गरेको आ’रोपमा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ। आफ्नै बाबुले ८ वर्षे छोरीको बला*त्का*र गरेको स्वयम् पि’डित छोरी र उनकी आमाले बताएकी छिन् । छोरीलाई पटक–पटक अ*श्लिल फिल्म देखाउँदै ब’ला’त्का’र गरेको खुलाएकी छिन् । श्रीमती नभएको मौका पारेर आफ्नी […]
भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई गो’लि ठो’क्न फिलिपिनि राष्ट्रपतिकाे आग्रह !
February 5, 2020 Spnews Comments Off on भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई गो’लि ठो’क्न फिलिपिनि राष्ट्रपतिकाे आग्रह !
फिलिपिनी जनतालाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रन फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटरटेले आग्रह गरेका छन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बाेल्दै राष्ट्रपति डुटरटेले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नम’र्ने गरि गो’लि ठो’क्न समेत आग्रह गरेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई जे’लको स’जाय […]
१४ करोड ८९ लाख तलब खाने बैंकर जसलाई स्यान्डविच चो’रीको आ’रोपमा निलम्बित गरियो
February 5, 2020 Spnews Comments Off on १४ करोड ८९ लाख तलब खाने बैंकर जसलाई स्यान्डविच चो’रीको आ’रोपमा निलम्बित गरियो
स्टाफ क्यान्टिनबाट स्यान्डविच चो’री गरेको आ’रोपमा एक उच्च बैंकरलाई कम्पनीले निलम्बित गरेको छ । युरोप, मध्य पूर्व र अफ्रिकाका लागि सिटी ग्रुपको उच्च ब्राण्ड ट्रेडिगको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पारश साहलाई निलम्बन गरिएको हो। क्यान्टिनबाट स्यान्डविच […]
February 5, 2020 Spnews Comments Off on अर्को दु:खद खबर ! मलेसियाको पेनाङ्गमा यी नेपाली युवाले गरे आ’त्मह’त्या
मलेसियाको पेनाङ्ग राज्यमा रोल्पा जिल्लाका गङ्गादेब गाउँपालिका २ डाडागाउ का कारण क्षेत्रीले आ’त्मह’त्या गरेका छ्न । पब्लिक प्याकेजेज कम्पनी मा कार्यरत २३ बर्सिय किरण जनावरी २८ तारिख कम्पनीको होस्टल नजिकै तामान पलाङ्गीको आकासे पुलमा झु*ण्डिएर […]
वनारसी जात्रा जहाँ दलित हुन्छन् ‘पूजारी’
February 5, 2020 Spnews Comments Off on वनारसी जात्रा जहाँ दलित हुन्छन् ‘पूजारी’
जिल्लाको प्रसिद्ध वनारसी मन्दिर (विश्वनाथ धाम) मा हरेक वर्ष माघ शुक्ल दशमीका दिन जात्रा हुने गर्छ। अन्य मन्दिरमा ब्राम्हण समुदायका मानिस पूजारी हुने भएपनि यो मन्दिरमा भने दलित समुदायका पूजारी छन् । दलित समुदायका पूजारीले पूजा […]
विवाह मन्डपमै बेहुला बेहुलीको हानाहान भएपछि !
February 5, 2020 Spnews Comments Off on विवाह मन्डपमै बेहुला बेहुलीको हानाहान भएपछि !
विवाह त एउटा उत्सवको समय पो हो त । जन्तीसहित बेहुला लिएर बेहुली लिएर आउनेहरु जहिले पनि खुसीको मुडमा हुन्छन् ।तर, भारतको तेलंगानाको एउटा सहरमा यस्तो भएको छैन । अचानक बेहुला बेहुली उठेर एकआपसमा लड्न […]